सरकार ! हामी कहिलेसम्म फाजिल भइरहने ? - दैनिक नेपाल न्युज
कर्णाली, २९ भदौ: नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागअन्तर्गत अहिले देशैभरि ४२३ जना खरिदार वा सोसरहका फरेस्टर कर्मचारी फाजिल अवस्थामा छन् । दुई वर्षदेखि फाजिल (बेवारिसे) अवस्थामै काम गर्न बाध्य उनीहरुलाई वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । फाजिलमा रहेका कर्मचारीले पटकपटक सरकारलाई पदस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका आएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत ५८ फाजिल कर्मचारीले आफूहरुलाई फाजिलबाट पदस्थापन गर्न भन्दै गत माघ ७ गते प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घ सरकारसँग मागपत्र बुझाएका थिए तर मागपत्रको सुनुवाइ सरकारले आठ महिना बित्दा पनि गर्न सकेको छैन । डोल्पा वन कार्यालयमा कार्यरत फरेस्टर कमल बोहोराले आफूहरुलाई बिना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिने काम गरेको रासससँग दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।
“हामी सबै लोकसेवा आयोगबाट आएका हौँ । हाम्रै साथीहरु दरबन्दीमा बसेर काम गरिरहेका छन् तर हामीलाई सरकारले बेवारिसे बनाएको छ”, बोहोराले भन्नुभयो, “हामीलाई अपमान मात्र गरिएको छैन, वृत्ति विकास हुनबाट पनि वञ्चित गरिएको छ । अब सरकार (राज्य)ले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।” बेलैमा दरबन्दीमा पदस्थापन नगरिए फाजिल कर्मचारीलाई विभाग तथा मन्त्रालय अगाडि अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उहाँको भनाइ थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेव जोशीले प्रदेशमा दरबन्दी नभएको तर सङ्घले प्रदेशअन्तर्गत पठाउँदा कर्मचारी फाजिलमा परेको जनाउनुभयो । कर्णालीका फरेस्टरको दरबन्दी खाली भन्नेबारे तत्काल बुझेर पदास्थापनका लागि पहल गर्ने सचिव जोशीको भनाइ थियो । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले विभागले देशैभरिका फाजिल कर्मचारीबारे जानकारी गराइसकेकाले समायोजनको पहल मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो ।
“फरेस्टरलाई विभिन्न प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाए पनि उनीहरु अहिले सङ्घअन्तर्गत नै छन्”, महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “समस्यामा पारेका छैनौँ । हामीले तलब पठाएका छौँ । उनीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या पर्दैन ।” उनीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेशका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाजिल कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले अब समायोजन जतिसक्दो चाँडो हुने उहाँको भनाइ थियो । निजमाति सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएर जुन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरियो त्यतिबेला सङ्घीय वन मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो ।
टीकापुर, २३ साउनः कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ मूलपानी नजिक भूराखानी क्षेत्र र वडा नं ५ मा भुराखानीमा कर्णाली नदीले कटान तीव्र पारेको छ । नदी कटान तीव्र भएपछि कटान भइरहेका ठाउँमा [...]